Iimpawu ze-Android eziza kuphehlelela ifowuni yokusonga ngo-2019 | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Zeziphi iifowuni ezisongelayo esiza kubona kwi-Android kulo nyaka?
Sazi iinyanga ukuba ukusonga ii-smartphones kuya kuba yenye ye iindlela ezinkulu kulo nyaka kwi-Android. Okwangoku, iintlobo ezahlukeneyo Ukuphuhlisa ii-smartphones zabo ezisongelayo. Kancinci kancinci sifunda ngakumbi ngeenkcukacha kwaye kukho abathile ukwaziswa kusondele kakhulu. Ke, kweli nqaku siqokelela iifowuni zolu hlobo esinokulindela ukuba zifike kwi-2019.
Ukusukela ukuba kubekho iindaba ezininzi malunga nokusonga ii-smartphones ukuza kuthi ga ngoku. Bathembisa ukuba yinto eguqukayo kwi-Android. Ke ngoko, kulungile ukwazi imeko yangoku yezi modeli zokuqala kulindeleke ukuba zisungulwe kwi-2019 kwintengiso.
Isamsung luphawu olo Iindaba ezininzi zivelisa i-smartphone yakho yokusonga. Ngethamsanqa, le ntetho iya kubakho kwi iiveki nje ezimbini, ke akufuneki silinde ixesha elide ukudibana naye. Kwakhona, isisixhobo esinolona lwazi sinalo ukuza kuthi ga ngoku. Emva intetho yakhe ngoNovemba kunye umcimbi wabucala kwi-CES 2019, ezisinike uninzi lwedatha kule modeli. Ibizelwe ukuba yenye yeeflegi kwi-Android kulo nyaka.
Ukongeza, ulwazi olutsha kunye nokuvuza malunga nale smartphone kuyaqhubeka nokufika. Ngamanye amaxesha, ibiyiSamsung uqobo olusithumelele olu lwazi, njengevidiyo apho unokusibona isixhobo kule veki. Kwiiveki nje ezimbini, NgoFebruwari 20Siza kudibana ne-smartphone yokuqala yokusonga evela kwi-Samsung.
IHuawei yenye yezinto ze-Android ezisebenza kwi-smartphone yayo yokusonga. Uphawu lwesiTshayina lunomsitho ocwangciselwe i 24 ngoFebruwari, apho kuthathwa ngokungenamsebenzi ukuba siya kuba nakho ukuyazi le fowuni. Ipowusta ethi uphawu lusetyenzisile ukuyibhengeza sele iphakamisa ukuba sisebenzisana nokusonga i-smartphone. Ukongeza, kule veki i Ukunikezelwa kokuqala yale fowuni.
Nangona inyani kukuba kwiinyanga kwathiwa uHuawei wayeza thaca i-smartphone yayo esongekayo kwi-MWC 2019. I-smartphone eya kuba nayo eyokuqala yohlobo lwaseTshayina ukufika nge5G. Ke ikwangowokuqala kwi-Android ukuhambelana.
Kwiinyanga ezidlule ukuba amarhe malunga ubukho befowuni yokuqala kaXiaomi. Uhlobo lwaseTshayina lujoyina olu luhlu lwabenzi be-Android abasebenza kwifowuni yolu hlobo. Kwakhona, kutshanje ividiyo yokuqala sele ivuza malunga nesi sixhobo. Ividiyo onokuthi uyibone uyilo lwesi sixhobo, ukongeza kwindlela eya kuthi inkqubo esebenza ngayo yohlobo lwesiTshayina kwi-smartphone yayo.
Ngokuyinxalenye bekungothusi, kuba kuyaziwa ukuba kule fowuni isongwayo, uXiaomi unayo Ungene ngoncedo lwe-Samsung, kwindawo yokubonisa. Ke ngoko, esi sixhobo sithembisa okuninzi, ngokungathandabuzekiyo esiya kwenza kucace ukuba uphawu yenye yezona zinto zintsha kule ndawo. Okwangoku asazi ukuba le modeli iza kufika nini.
Olunye uphawu lwe-Android ngoku olusebenzayo kwi-smart foldable yi-LG. Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ukuba amarhe okuqala aqala malunga nophuhliso lwe-smartphone ngohlobo lwaseKorea. Ingcaciso encinci ngokuthe kratya sele ifikile, njengomhla wokufayilisha onokwenzeka yale modeli. Ngelixa ingatyhilwanga kwi-CES 2019, kulindeleke ukuba ifike ngo-2019 wonke.
I-LG iya kubheja kwinkqubo eyahlukileyo kunezinye iimveliso kwi-Android. Kuba kwimeko yakhe, uphawu luya kubheja kwifowuni nge Iscreen sesibini esinokuqhotyoshelwa. Yintoni evumela ukuphindaphinda ubungakanani befowuni. Nangona le yinto ingekaqinisekiswa. Kodwa ithembisa ukuba yeyona modeli inomdla.
Kwimeko ye-Motorola, Besiqala ukuvuza ukusukela ngo-Agasti malunga noku kusonga i-smartphone. I-brand sele inamalungelo awodwa abhalisiweyo obhaliso, kwaye kucingelwa ukuba iya kuba yinguqulelo entsha yeRAZR yakhe yodumo. Kude kube ngoku, nangona sele zikho ezininzi panther, akukho lwazi luthile malunga nokufika kwakhe. Nangona kukho amajelo eendaba athi ukuba iyakwenzeka ngoFebruwari.
Kodwa, kuyacaca ukuba iya kufika ngo-2019, eyenza uluhlu lweempawu kwi-Android kunye nefowuni yokusonga ngakumbi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Zeziphi iifowuni ezisongelayo esiza kubona kwi-Android kulo nyaka?
Ezona pilisi zintle onokuthi uzinike uSuku lweValentine
I-Energizer iza kufika ngee-smartphones ezingama-26 ezintsha kwi-MWC 2019